Khariidadaha qad la'aanta ah ee iPhone talaabo talaabo aad u fudud ah | Wararka IPhone
Khariidadaha qad la'aanta ee iPhone talaabo talaabo aad u fudud
Pablo Aparicio | | iPhone, Noticias, Casharrada iyo buugaagta
Waqti hore waa waqtiyadii a GPS, aaladdaas weyn oo qaali ah oo kaliya awood u leh inay maamusho GPS-ka aan soo sheegnay, si ay u aado meel kasta oo aynaan ogeyn. Muddo sanado ah ayaa suurtagal ahayd in la isticmaalo codsiyada adeegsada khariidadaha qad la'aanta taleefannadeenna gacanta, laakiin si aad u adeegsato barnaamijyadan waxay ahayd inaad lacag badan bixiso ama aad ku hesho qaab kale. Iyo in yar oo kayar, barnaamijyada khariidadaha qad la'aanta ah ee codka lagu hago ee bilaashka ah ayaa sidoo kale la helay.
Kuwa ugu caansan waa Khariidadaha Google, laakiin qodobkan kama hadlayno khariidadaha mashiinka raadinta weyn. Sababta waa mid fudud: ma soo dejisan karno khariidadaha aag kasta oo waxa aan dooneyno waa codsi noo ogolaanaya inaan kala soo baxno khariidad kasta. Khariidadaha khadka tooska ah ee bilaashka ah ee bilaashka ah ee sidoo kale nagu hagaya codku waa Nokia Halkan.
Waqti fog ka hor, Nokia waxay heshay mid ka mid ah labada shirkadood ee ugu muhiimsan khariidaynta waxayna ku siisay khariidado tayo leh taleefannadooda, bilaashna taasna way noo oggolaatay soo dejiso ku dhowaad khariidad kasta adduunka inta jeer ee aan dooneynay, sidaa darteed qasab ma ahayn in looga tago iyaga oo ku kaydsan qalabka. Oo hadda, muddo dheer, waxaan haynaa khariidadahaas oo laga heli karo macruufka.
Sida Loogu Soo Degsado Khariidadaha Nokia
Marka hore, ka faallo inaad ku qasban tahay ka diiwaan gashan Nokia Halkan (waad ka heli kartaa barnaamijka) si aad u soo dejiso khariidadaha.
Marka xigta, waxaan qaadnaa talaabooyinka soo socda:
Waxaan ku ciyaareynaa seddexda sadarba.
Waxaan ku dhufanaynaa khariidadaha Soo dejisan.
Waxaan ku dhajinaynaa Hel khariidadaada hadda.
Waxaan raadineynaa khariidada aan rabno inaan soo dejino.
Waxaan taabannaa fallaarta hoose oo aan sugeynaa inay soo dejiso.
Ugu dambeyntiina, si aan ugu noqonno khariidada waxaan dhowr jeer ku taabannaa falaarta si aan ugu laabanno. Waxay mar horeba ku dari lahaayeen batoon si toos ugu noqdaan khariidadaha.
Waana taas. Adeegsiga khariidadaha waa dareen dareen leh. Kaliya waa inaad raadis ka sameysaa muraayadda weyneysa, ka dibna taabo astaanta fallaaraha oo aad doorataa habka gaadiidka. Dabcan, codka Isbaanishka sidoo kale waa in lasoo dejiyaa ama wuxuu nagula hadli doonaa Ingiriis. Codka Isbaanishka waa la horumarin karaa, laakiin waxa muhiimka ah waa inaan helno tilmaamaha saxda ah.
Qariiradaha waa lacag la’aan hadda, laakiin ma ogin sida ay noqon doonto mustaqbalka sida Audi, BMW iyo Daimler ay dhawaan iibsadeen. Waxaan rajeyneynaa inaysan wax isbeddelin, maxaa yeelay khariidadaha ayaa aad u wanaagsan. Hadday iyaguna xor yihiin oo aan ku isticmaali karno qadka tooska ah, maxaan kale oo aan weydiisan karnaa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Khariidadaha qad la'aanta ee iPhone talaabo talaabo aad u fudud
* Haddii aan haysano iphone 1.1.13 ama ka sareeya: marka hore iLM 1.1.13+ Fix xirmo ka dibna xirmada iLM sidaan oo kale ah.
* Haddii aan haysanno iPhone leh nooc ka dambeeya 1.1.13, kaliya xirmada iLM.
Waa maxay farqiga u dhexeeya 1.1.3 ka sareeya ama ka sarreeya 1.1.3: S ???
Sidoo kale, waa 1.1.3, maahan 1.1.13.
Fadlan, ma ii cadeyn kartaa maxaan sameeyaa haddii aan haysto 1.1.4?
Sidoo kale, waad ku mahadsan tahay dib-u-eegista, codsigu aad buu u wanaagsan yahay.
Ku jawaab Afontcu
Ma heli karo wadadii aan khariidadayda u dhigi lahaa iyada oo loo marayo SSH oo leh wincp. Waxaan haystaa 1.1.4. Mahadsanid, ma i caawin kartaa?
Ku jawaab jbautista
Waa inaad tagtaa feylka asalka ah halkaana laga maro wadada la tilmaamay.
waa inaad abuurtaa galka Maps-ka.
Jawaab ku bixi setio
Waad salaaman tihiin, waad ku mahadsan tihiin inaad ii sheegteen in qaladka mar hore wax laga badalay.
Waxaan ka xumahay in aan idinla socodsiiyo in nooca uu yahay 1.1.14 oo sidoo kale loo yaqaan 1.1.4, markaa nooca cusub waa 1.2 ka dibna loo bixiyay 2.0.
Haddii aad haysato 1.1.14, sida uu dhigayo casharradu, waa inaad marka hore rakibtaa "iLM 1.1.13+ Fix" ka dibna "ilm" waxay u muuqataa inay yihiin kuwa ugu horreeya, laakiin labaduba waa labadaba, laakiin maahan.
Shirkadda BlasterCorp dijo
Google ayaa xannibay ip-keyga markii aan sidan sameeyay 🙁
Ku jawaab BlasterCorp
Aniga ahaan, "goor dambe" waxaa loola jeedaa "hore", markaa haddii aad leedahay 1.1.4 waa inaad rakibtaa balastarka 1.1.3+ (ogow "+" gadaasha) 🙂 ka dibna ilm.
Dabcan, waxaan haystaa 1.1.4 mana aanan fahmin ilaa goor dambe. In kasta oo aanan wali awoodin in aan ku caddeeyo khariidadaha haddii ay socdaan iyo in kale.
Ku jawaab Zynex
taasina waa fududahay? maxaa argagax ah. Waxaan u maleynayaa inay fududahay in la helo barta wifi oo laga arko khariidadaha khadka tooska ah.
haa haa, gadaal waxaan horeyba ugusoodhacayay inaanu sameyn doono guuldaro, qofkasta wuu hayaa.
Sidee la yaab leh in Google xannibay IP-gaagii shalay waxaan sameeyay laba khariidadood oo dhibaato la'aan, imisa ayaad qabatay?
berrito waxay noqon doontaa mid aad u ammaan ah.
Waxaan haystaa 1.1.4 oo si fiican ayey u socotaa dhibaato la'aan.
Haddii qof doonayo khariidada Madrid, waan soo gelinayaa.
Way u fududahay inay ku dhaafiyaan khariidadaha laakiin way adag tahay qof inuu yeesho mid la mid ah kanaga, sikastaba ha noqotee waa la is weydaarsan karaa iyo taas.
ps: «Xannibaadda Google waa mid kumeelgaar ah oo ay ugu wacan tahay farsamo amni oo lagu ogaado weerarada iyo codsiyada soo noqnoqda ee isla IP-ga ah. wax laga walwalo. "
Barnaamijku iguma habboona. Markii aan siiyo Qalabka Khariidadda Caalamka ee Soo Degsashada.exe ma furmayo. Fikrado kasta?
Ku jawaab arralbatros
mmm..ami galka Khariidadaha ayaa aniga mar hore la ii abuuray, macquul ma tahay? Waxaan sidoo kale ku guuriyaa galka gudihiisa khariidadaha horey loogu sii diyaariyay iphone ka dibna taleefoonka waxaan daaraa ILM mana muuqdaan ... Ma jiraa qof og waxa aan qaldayo?
Ku jawaab alesuco
Waa inaad kuqortaa khariidadaha midkasta galka sida Madrid ama Barcelona.
taasi waa in la yiraahdo ... Khariidadaha dhexdooda waxaan ku abuurey galka la yiraahdo Madrid (tusaale ahaan) gudahana waxaan nuqul uga sameeyaa galka barnaamijka la diyaariyey na siinayo?
Haye, waxay ii ogolaaneysaa inaan maro khariidada, laakiin ma heli karo cinwaan hadaan ka dhex baaro khariidada gudaheeda, wax xal ah? Cinwaannada la keydiyey wuu shaqeeyaa, xitaa dariiqa u dhexeeya labada cinwaan ee la keydiyay.
Isla waxaas oo kale ayaa igu dhaca aniga oo ah alesuco. Waxaan dhigay khariidadaha, waxaan ku siinayaa khariidada ILM, laakiin markaa khariidad laguma arko khariidadaha google.
Arralbatros waad iga fiicantahay, xitaa ILM ima muuqato aniga lol waxaan galiyaa galka siiya barnaamijka lagu diyaariyey galka khariidadaha iyada oo loo marayo SSH mana soo baxo, ma jirto wado ...
Aniga sidoo kale iima shaqeyso Waan damiyaa wifi, waxaan furaa iLM, waxaan xushaa khariidada aan abuuray ama qaar kale oo aan soo degsaday hadii aanan si sax ah u qaban, waxaan doortaa Action Link mararka qaar iyo waxqabad kale oo Action ah hadiiba ay dhacdo, ugu dambeyn Tag Khariidado, oo waxba kama muuqato gabi ahaanba.
Waxaan rakibay oo aan ka xayuubiyay iLM 1.1.13+ Fix iyo xirmada iLM si aan isugu dayo inaan u wada rakibo ama si gooni gooni ah, laakiin hadda Installer kaliya iLM ver 0.2.1 ayaa soo muuqanaya, taas oo aanan garanayn inay tahay tii hore.
Qof ma i caawin karaa? Waxaan ubaahanahay barnaamijkan. Mahadsanid.
Ku jawaab Z-Thor
Aan aragno kahor intaadan rakibin hagaajinta marka hore kadibna ilmaga
hadda waxaan u maleynayaa in ilmuhu cusub uusan u baahnayn hagaajinta.
Casharka casharku wuu shaqeeyaa maxaa yeelay waan istcimaalaa iyo inbadan oo halkan ah sidoo kale talaabo talaabo ayaan ula socdaa waadna arki doontaa sida uu ku soo baxo.
si fiican u eeg noocyada iphone.
oo khariidadaha geli galka khariidadaha iyo galkaas galka khariidad kasta.
Hagaag, ma awoodo ... heheh !! way isoo celisaa !! waa inaan ku dhigo wadada ay dhigeyso, waxaan daaraa ILM iyaguna kama muuqdaan liiska ... sida haddii aanan sameyn ku rid meesha saxda ah, maxaa xitaa xitaa u muuqan waayey ... waa inaan nuqul ka qaadnaa galka uu barnaamijka iphone-ka na siinayo khariidadaha, miyaanay ahayn inaan magac gaar ah dhigno?
Aad ayey muhiim u tahay in galka halka faylasha uu ka sameynayo Global Map ay ka sameysaneyso tillaabada ugu horreysa la soo dejinayo ay ka bilaabaneyso hoosta ka xariiqaysa "_". Si looga fogaado dhibaatooyinka, waxaan hore ugu abuuray anigoo ah daaqadaha sahmiyaha ka dibna waxaan ka raadiyey Khariidadaha Caalamiga ah badhanka "set", oo ku yaal xagga sare.
Ka dib markaad gujiso "Uncheck any alles with with ..." barnaamijka wuxuu ku abuuraa galka ku bilaabmaya _ shan faylasha GPSFS ah oo AAN wali aheyn kuwa loo guurinayo iPhone-ka.
Marka xigta waxaan gujinaynaa badhanka «-> iPhn», iyo «Khariidadda Magaca…:» waxaan dhigeynaa marinka aan ka soo dejisannay khariidadda, oo sida caadiga ah horayba ugu muuqan doona mid qoran. Soo Saarista, si looga fogaado dhibaatooyinka, waxaan ka tagay wadadii u muuqatay sida caadiga ah, taas oo abuureysa galka iphone_map ee Desktop-ka, iyo kadib markaad riixdo batoonka «Process (riix halkan…)» oo aan sugayo inta ay dhameynayso laba feylood, «Com.apple.Maps.plist» iyo «MapTiles.sqlitedb» oo ah kuwa ay tahay inaan u soo dhigno iPhone-keena.
Si looga fogaado dhibaatooyinka, haddii aan rabno inaan ku celcelino hawsha marar badan khariidado cusub, waxaan ka tirtirayaa galka iphone_map shaashadda, oo waxaan bilaabayaa hawsha.
Ugu dambeyntiina, kuwa aan haysan Wi-Fi, barnaamijka "iPhone PC Suite" wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku xirto iPhone-ka kombuyuutarka adoo adeegsanaya xarig.
Xirmada iLM 1.1.13+ Fix iima muuqato. Waxaan hayaa 1.1.4, xirmadaas ma loo baahan yahay mise si toos ah ayaan u dajin karaa iLM ??
Ku jawaab Rascasse
xirmada hagaajinta ilem meesha kuma taal, kaliya rakib ilm wuuna shaqeyn doonaa, horey ayey u hagaajiyeen.
Aniga ahaan, Faylka Warbaahinta wuxuu ku dhex muuqdaa galka guurguura ee kuma dhex jiro xididka. Miyey tahay meesha ay tahay inaan nuqulo feylasha ama miyaan sameeyaa galka kale oo la yiraahdo Media root asalka ah?
Ku jawaab si aad u xoqdo
wuxuu ka dhigayaa korka haddii aad leedahay 1.1.3 ama 1.1.4 moobiil haddii kale xidid
Haa, waan garwaaqsaday goor dambe, waa inaan samir badanahay oo aanan dhammayn aqrintiisii, raali ahaw.
Waana mahadsantahay markale.
Ip si joogto ah ayaa loo xiraa, iima ogola inaan khariidadaha ka soo dejiyo gabi ahaanba ,,, Waxaan isku dayay inaan sugo dhowr maalmood waxna ma jiraan. block ayaa sii wadaya wixii soo jeedin ah ?????????
Waxaan marhore iskudayay inaan badalo cinwaanka ip laakiin xanibaada waa joogto ,,,
Waad salaaman tihiin, waxaan haystaa Mac mana furi karo faylasha ama barnaamijyada exe, sideen ku sameeyaa markaa ???
Barnaamijku aad buu u xun yahay, waxaan xannibay IP-ga jimcihii maantana Isniinta waxaan isku dayay inaan mar kale hoos u dhaco mana aanan gaarin inaan soo dejiyo khariidad markii ay ii sheegayso inaan markale xirmay ...
Ma soo rari kartaa khariidada Madrid? Runtii waan ku qanacsanahay, mahadsanid!
Ku jawaab jose manuel
Miyuu qof ii sheegi karaa meesha aan ka soo dejisan karo khariidadaha, maxaa yeelay midka Argentina wuxuu u soo baxaa si madhan oo ay la socdaan dhowr waddan oo Koonfurta Ameerika ah.
xanaaq badan dijo
Ka waran aniga oo rakibey isha isha i7ane.com ee ipod taabashada, laakiin markaan fiiriyo rakib faylka barnaamijyada khariidada, waan raadiyaa mana muuqdo, ma iga caawin kartaa tan, mahadsanid
Ku jawaab xanaaq
Laakiin ma waxay u shaqeysay 2.0 oo xabsiga laga sii daayay? XD
Ku jawaab angellpdgc
angellpdgc, loogu talagalay 2.0.1 waa OfflineMaps. Qalliin isku mid ah sidaan u fahmay.
Laakiin barnaamijkan, markaad ka baxsan tahay ma raadsan kartid waddooyinka khariidada, sax?
Waxaan hayaa nooca 2.0.1 ee iphone-ka waxaanan helay khariidadaha offline-ka ah ee aan ku shaqeyn karo, laakiin waxa aanan heli karin ayaa ah inay socoto marka uusan jirin isku xirnaanta Wi-Fi, qof ma isiin karaa fiilo ???
Jawaab yaab leh
Wanaagsan, waxaan u baahanahay macluumaad ku saabsan halka aan ka helo barnaamijka rakibayaasha .. Mahadsanid
Waxaan hayaa iphone oo wata firmware 2.2 ku dar repo oo hadaan abuuro galka barnaamijyada khariidada, iLM way muuqataa laakiin markii aan isku dayo inaan raro waxaan helayaa farriin leh «» Khalad aan awoodin inaan cadeeyo xirmada faahfaahin dheeraad ah http://jasonkit.googlecode.com»Waxna ma dhacaan, wax caawimaad ah oo arrintan la xidhiidha, hore aad ayaad u mahadsan tahay
Waan ka xumahay in aanan fahmin laakiin ma garanayo sida loo galo iphone-kayga si loogu daro khariidadaha ARGENTINA oo ah tan ugu badan ee aan doonayo hadaad ii sharixi karto sidaa darteed waxaan isku dayaa inaan ku rakibo thanks atte. LUCAS G. PEDRINI
Waxaan hayaa iphone oo wata firmware 2.2 ku dar repo oo hadaan abuuro galka barnaamijyada khariidada, iLM way muuqataa laakiin markaan isku dayo inaan rakibo waxaan helaa fariin leh "" Khalad ma awoodo inaan cadeeyo xirmada faahfaahin dheeraad http://jasonkit.googlecode.com” waxna ma dhacaan, wax caawimaad ah oo la xidhiidha tan, hore aad ayaad u mahadsan tahay
Waxaa jira codsi cusub oo kuu oggolaanaya inaad aragto khariidadaha qad la'aanta ah si aad uga soo dejiso dukaanka.
Marka lagu daro daawashada khariidadaha, barnaamijkan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad raadiso meelo oo aad xisaabiso dariiqyada INTAad ka baxsan tahay ...
Waxaan rajeynayaa inay waxtar leedahay
Khariidadaha runta ah ayaa kuu oggolaanaya inaad raadiso meelaha iyo waddooyinka + Waddooyinka xisaabinta AADAN U BAAHNAYN IN LA ISKU XIRO ...
waa khalad dijo
Waxaan hayaa iphone 3g, khariidado haddii dhibicdu muuqato, laakiin ma sawiri karo waddo aan kaga raaco hal dhibic illaa mid kale, maxaan sameyn karaa
Ku jawaab isacc
Waad salaaman tahay, waxaan xiiseynayaa inaan u wareejiyo faylasha GPSFS ECW, qof ma i caawin karaa
Grrrrrrr google ayaa iga xanibay markaan waxan sameeyay….
Tani ma shaqeyneyso, repo-ga xitaa ma jiro, naftaada u cusbooneysii mid caato ah